Ọka mmụta sayensị na-akpọku NAFDAC ka ha nyochaa ebe nri ngwa ngwa maka iji ọgwụ nje mee ihe. – Igbo Services
Ọka mmụta sayensị na-akpọku NAFDAC ka ha nyochaa ebe nri ngwa ngwa maka iji ọgwụ nje mee ihe.
Otu ọkà mmụta sayensị Naijiria na prọfesọ Biochemistry na Biotechnology, Bamidele Iwalokun, akpọọla National Agency for Food and Drug Administration and Control ka ha mepụta atụmatụ maka nyocha ebe nri ngwa ngwa maka iji ọgwụ nje mee ihe na nkwadebe ha.
Prọfesọ Iwalokun, bụ onye isi oche, Central Research Laboratory, Nigerian Institute of Medical Research, Yaba, Lagos, kwuru na nke a aghọwo ihe dị mkpa, na-ekwu maka akụkọ ndị a kọrọ na mba ndị ọzọ ebe a na-eji ọgwụ nje eme ihe na nri ngwa ngwa.
O kwuru, n’agbanyeghị na ọ nwebeghị ikpe a kọrọ na Naijiria, omume a nwere ike ịdị na-aga n’ihu na mba ahụ, “NAFDAC kwesịrị ịkwalite mmata maka ihe egwu dị n’iji ọgwụ nje eme ihe ma machibido onye ọ bụla na-ere nri na-etinye aka na ya.”
Dị ka ọkà mmụta sayensị si kwuo, otu n’ime mpụta na mgbasa nke ọgwụ nje na-eguzogide bụ iji ọgwụ nje mee ihe na anụ ụlọ, anụ ọkụkọ, nakwa na njikere iri nri nke a makwaara dị ka nri ngwa ngwa.
Onye nyocha ahụ kọwara, “Ugbu a, na anụ ụlọ na anụ ọkụkọ, ndị ọrụ ugbo na-ejikarị ọgwụ nje eme ihe dị ka ndị na-akwalite uto. Ha na-achọ inweta nnukwu ngwaahịa ugbo ha iji nwetakwuo ego.
“Ihe ọzọ mere ndị ọrụ ugbo ji eji ọgwụ nje eme ihe bụ iji gbochie anụ ụlọ ịrịa ọrịa. Dị nnọọ ka a ga-eji otu ọgwụ nje ahụ agwọ ọrịa mgbe ha mere, ihe mbụ a na-eji eme ihe bụ iji ọgwụ nje eme ihe n’ụzọ na-ezighị ezi ebe nke ikpeazụ bụ iji ọgwụ nje mee ihe.
Nghọgbụ njem mbiri, mwakpo n’ọnọdu nhuju anya”, agba nke mbu.
Red Cross zụrụ ndị ọrụ iri isii nke òtù okpukpe na enyemaka mbụ.
AMAC ga-ebubee nlekọta ahụike ụzọ.
Soludo ewepụtala ụlọ ọrụ ikuku oxygen dị nde narị naịra abụọ na Steeti Anambra.
Ndị ọkà mmụta sayensị achọpụtala ihe ọhụrụ molekul na-egbu ọrịa kansa na-esi ike…